Ihe ngbanwe dị ugbu a, Mgbanwe Amorphous Core, Ngbanwe dị elu-Malio
Transformer dị ugbu a
Nkenke ngbanwe dị ugbu a
Ụdị ihe ngbanwe dị ugbu a nke PCB
Ụdị nshịkọ dị ugbu a
Ụdị casing ugbu a Transformer
Na Busbar Transformer ugbu a
Voltaji/nwere ike ngbanwe
Gbawara Core ugbu a Transformer
Nkeji atọ ugbu a transformer
Ihe mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a
Ụdị akụkụ anọ
Ngwa igwe eletrik
Ndị na-agbanwe ike
Ihe ntụgharị ọkụ na-agbanwe ugboro ugboro dị elu
Ihe ngbanwe ike agbakwunyere
EBW Shunt kwadoro PCB
EBW Shunt nwere ọdụ Brass
Akụkụ Ọdịdị nke Relay
Njikọ nọpụ iche
TN / HTTP / STN / FSTN LCD ngosi
Ọnụ ọnụ ọnụ
Fe-Dabere 1K101 Amorphous Ribbon
Fe-Dabere 1K107 Nanocsyrstalline Ribbon
Fe-Dabere Amorphous C cores
Fe-Dabere Amorphous E cores
Ogwe mgbochi Fe-Dabere na Amorphous
Ihe ntụgharị isi ugbu a
Fe-Dabere Nanocrystalline Power transformer Core
Ụdị Choke nkịtị
Ndị na-eweta ngwaahịa agbakwunyere maka ngwa ọkụ eletrik
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shanghai Malio Industrial Ltd. bụ isi na mba akụ na ụba na ego center nke Shanghai, China nke na-elekwasị anya na azụmahịa nke metering components na magnetik ihe. Site na mmepe nke afọ, ugbu a ka emebere ya ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ejikọta nhazi, nyocha, mmepe, mmepụta na ire ere. Malio nwere ike inye gị nkwado dị ukwuu n'ọhịa nke ọkụ eletrik na eletrọnịkị, akụrụngwa mmepụta ihe, ngwa nkenke, nkwukọrịta, ikuku, ike anyanwụ na EV wdg.
Ụdị Nfefe dị ugbu a nke AC/DC PCB dị nkenke.
Ụdị Bushing AC / DC Transformer ugbu a maka smar ...
Ụdị casing nkenke ngbanwe dị ugbu a
Ụdị ihe ngbanwe dị ugbu a nke Busbar DC
Ugwu PCB Ụdị voltaji/Nfefe nwere ike ugbu a...
Mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a sensọ gbawara isi ihe ntụgharị
Nkeji atọ ejikọtara transformer ugbu a maka El...
PCB agbakwunyere ngbanwe ọkụ eletrik agbakwunyere...
Ngosipụta akụkụ LCD/LCM ahaziri maka nha
Akụkụ ọnụ ọnụ mechanical maka Eletriki D...
Ọnụ ọnụ Brass/ Screw Terminal maka ọkụ eletrik ...
Eletrik mita PCB-ndokwasa EBW Manganese Cop...
Eletrik Mita EBW Manganese Copper Shunt na...
120A Magnetik Latching Relay maka Smart Mita
Fe-Dabere 1K107 Nanocrystalline Ribbon
Fe-Dabere Amorphous Atọ agba E cores MLAE-2134
Fe-Dabere Amorphous C Cores MLAC-2133
Ngwa magnetik nke reactor dị elu /...
N'ịbụ nke dị na ọdụ akụ na ụba na ngwa ngwa mba ụwa, ọrụ ụgbọ mmiri na ikuku anyị dị mma na-akwalite nrụpụta mbupu.
Ogologo oge na-elekwasị anya na ahịa esenidụt, anyị na-enye ngwaahịa omenala na ahaziri iche iji gboo mkpa ndị ahịa na mba na mpaghara 30 n'ụwa nile.
Ndepụta zuru oke nke ngwaahịa ọdịnala dị njikere maka mbupu, ebe enwere ike imepụta ngwaahịa ahaziri ma wepụta ya na nhazi mmepụta nke ọma.
Nọvemba 16, 2021
Nchekwa oke ibu maka moto eletriki
Onyonyo ọkụ bụ ụzọ dị mfe iji chọpụta ọdịiche okpomọkụ pụtara ìhè na sekit eletriki nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma e jiri ya tụnyere ọnọdụ ha na-arụ ọrụ. Site n'inyocha ihe dị iche iche na-ekpo ọkụ nke akụkụ atọ n'akụkụ n'akụkụ, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ nwere ike hụ ngwa ngwa anomalies arụmọrụ na i ...
Ọnwa Isii 01, 2021
Kedu ihe kpatara eji achọ ndozi nke transformer?
1. Ebumnobi na ụdị nke nrụzi transformer a. Ebumnobi a na-arụzi ihe nrụzigharị ihe bụ isi ebumnobi na-arụzi ihe ngbanwe bụ iji hụ na a na-edobe transformer na ngwa ndị dị n'ime na nke dị n'ọnọdụ dị mma, "dabara maka ebumnuche ahụ" ma nwee ike ịrụ ọrụ ...
adreesị: No.536, Laolu Road, Laogang Town, Pudong New Mpaghara, Shanghai, China
Ekwentị / WeChat / WhatsApp: